Kedu ka m ga-esi edobe igwe kwụ otu ebe n’ụlọ m? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Apt bike rack - azịza na ajụjụ dị iche iche
Kedu ka m ga-esi edobe igwe kwụ otu ebe n’ụlọ m?
Nke a bụ ndụmọdụ 7 makaịchekwa igwe kwụ otu eben'imeulo gima ọ bụ obere ụlọ.
Kpọgidere ya. Ihe ngwọta kachasị mfe bụ ịwụnye nko site na uko ụlọ ma kwụgidereigwe kwụ otu ebe gịmgbe ị naghị eji ya.
Tinye na mgbidi.
Nwetaigwe kwụ otu ebeọ bụ ezie.
Mia ya si n'anya.
Gaa makaigwe kwụ otu ebeogbe.
Zoo ya n'okpuru akwa mgbago.
Tochọrọ ịsa igwe kwụ otu ebe ma ị na-ebi n'ụlọ ma ọ bụ ụlọ ị na-enweghị ohere ịbanye na sooks ma ọ bụ yad ime ya. Kedu otu esi asa igwe kwụ otu ebe, olee otu esi ehicha igwe gi? Ke ibuotikọ emi Aga m egosi gị otú. N’ezie, aga m egosi gị ọtụtụ ụzọ ị ga - esi mee ya.
Mana tupu m mee, ọ bụrụ na ị nwere ekele maka ọdịnaya anyị ma chọọ ịkwado ọwa ahụ, ị ​​nwere ike ime ya site na ịpị ịdenye aha na mgbịrịgba ngosi. (Logo pops) (logo rustles) (egwu obi ụtọ) Nke mbụ, n'agbanyeghị ebe ị ga-ehicha ịnyịnya ígwè gị, ị ga-achọ ụfọdụ ngwaọrụ. Di na nwunye na a sponges na a siri ike ahịhịa.
Ngwaọrụ ndị a bara ezigbo uru, mana ọ dịghị mkpa. Specialfọdụ ndị na-ehicha igwe pụrụ iche, ị nwere ike iji ncha nhicha. Ngwunye olu.
Na ụfọdụ brushes pụrụ iche. Mbụ i nwere ike iji mmiri ịsa ahụ gị. Naanị hụ na ndị ọzọ bi n'ụlọ gị achọpụtaghị banyere ya.
o nwere ihe o mere oge ubochi I na emega
Ugbu a ana m akwado ịwepụ ihe ndị ọzọ na mpaghara ahụ ma ọ bụrụ na ịchọghị unyi, nke ahụ gụnyere akwa nhicha gị, ọcha, akwa ọcha. Ma ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ịsa ahụ na-emechi mgbe ahụ nke ahụ dịtụ mma karịa n'ihi ya ọ na-enyere aka ịfụfụ ma ọ bụ unyi site na igwe kwụ otu ebe. Ọfọn, otu uru nke ịme ya n'ezie na ịsa ahụ ma ọ bụ ịsa ahụ bụ na ịnwere ike iji mmiri ọkụ, mmiri ọkụ dị mma maka nhicha.
Ma nke ahụ bụ n'ihi na ịsachasị unyi na-agbari na mmiri, mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-ebili, ọ na-eme ka nsogbu dị. Sayensị. Ma ghara iji mmiri esi.
Agaghị m akwado iji mmiri esi mmiri n’elu igwe kwụ otu ebe, ọ nwere ike imebi ya. Echefukwala iwepu ihe nile n’igwe gi nke ichoghi iju mmiri, ya mere wepu m wahoo. Kalama mmiri, saddlebag ma ọ bụrụ na inwere nke gị.
Ugbu a amaara m na igwe kwụ otu ebe m abụghị ihe ruru unyi ugbu a, yabụ ị ga-ahapụrịrị ka echiche gị na-agba ọsọ ma chee na ọ ruru unyi kpam kpam. Nhọrọ dị mma ugbu a bụ idozi igwe kwụ otu ebe ka akụkụ kacha nke igwe kwụ otu ebe ghara ịsachasị nsị nke igwe kwụ otu ebe. Ya mere, ọ dị ntakịrị ka m mere ebe a.
Nke dirtiest akụkụ nke igwe kwụ otu ebe bụ na-abụkarị ndị mbanye na cassette na plọg oghere ala n'ebe ahụ, ọ bụghị ihe ndị ọzọ nke igwe kwụ otu ebe mgbe m malitere ịsa. Yabụ nke mbụ, m ga-asachapụ okpokoro ahụ. Ya mere buru ụzọ kpochapụ igwe kwụ otu ebe ma jirizie ogbo na obere mmiri ncha, ma ọ bụ jiri ihe nhicha ahụ pụrụ iche ma ọ bụ naanị ihe eji eme efere.
Fụfụ, ma na-adịghị na-asa ya anya ma. Na ncha igwe nchacha na akụkụ nke fọdụrụ na etiti ahụ, ị ​​ga-eji ụfọdụ degreaser igwe kwụ otu ebe na ya na yinye na sprockets na-etinye akụkụ nke ụgbọ oloko ahụ yana wiilị nkwado, ọtụtụ oke unyi na-agbakọ ebe a. Mgbe ahụ were isi gị ma sachaa suds na degreaser.
Ọzọ, ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ịgbanye crank mgbe ị na-eme nke a. Ma egbula mmiri dị elu nke ukwuu na ebe ndị nwere nsogbu dị ka biarin na hubs, dị mma maka nhicha ngwa ngwa, mana maka nhicha zuru oke ị ga-achọ iwepụ ihe dịka wiil n'ihi na unyi na-enwe mmasị izobe na ebe ị enweghị ike iji wiil ndị ahụ erute. Ọzọkwa, m belatara agbụ ahụ otu oge, nke dị mma, mana ọ naghị ehicha kpamkpam.
Iji kpochaa ya kpamkpam, ị kwesịrị ime ya ma ọ dịkarịa ala abụọ ruo ugboro atọ. N'ebe a, m ga - asị na jiri akwa ochie ma ọ bụ akwa nhicha ochie kpoo igwe kwụ otu ebe ma tinye WD-40 ụfọdụ iji wepu mmiri site na obere olulu na ebe ị na - achọghị nchara, dịka ime ụlọ ịwụ ahụ. B. na calipers, bụ kpochapụwo ebe.
Ma etinyela WD-40 n’elu agbụ gị, Simon Richardson, WD-40, Simon Richardson, abụghị mmanụ a agbụ. (egwu dị egwu) Oge ụfọdụ igwe kwụ otu ebe gị ruru unyi nke na ị chọghị iburu ya gburugburu ụlọ gị. Ikekwe ị mere obe ra ce, ma ọ bụ ma eleghị anya, ị dị ezigbo ọcha.
Agbanyeghị, i nwere a di na nwunye nke nhọrọ. Ihe mbu bu ezigbo ulo ahia ugbo ochie ma obu mmanu mmanu ma obu American. Mana teknụzụ ihe a na-ere dị n'ụdị mmiri, ọ bụghị mmanụ ụgbọala.
Ihe ọ bụla. Imirikiti ọdụ gas nwere ihe eji egwu mmiri, a na-eji ha maka ịkwọ ụgbọala, mana ha dịkwa mma maka ịsa igwe. Aha-dobe mkpu, enwetara m echiche a n'aka Nico Roche, onye m banyere mgbe m na-agagharị n'okporo ámá Monaco ma chọọ ime nke ahụ na igwe kwụ otu ebe na ọdụ ụgbọ.
Bịanụ. N'ọnọdụ ọ bụla, m ga-akwado ka ị weta brush gị na degreaser gị ma tinye ụfọdụ n'ime ya tupu ị na-eji jet jet. Ọzọkwa, ka echiche gị na-agba ọsọ, igwe kwụ otu ebe m dị ọcha karịa ugbu a karịa ka ha dị na mbụ, ebe m butere ha n’okpuru mmiri.
Were ya na ọ dị ezigbo unyi ugbu a. Igwe jet a nwere ike ịdị ike, m na-ekwu na e mepụtara ha maka ụgbọ ala. Yabụ tupu ibibi igwe kwụ otu ebe gị, gaa otu n'ime ntọala dị mfe ma ọ bụrụ na ọnọdụ iwepụ na-adịkarị mma, ma ọ bụ laghachi na ya ka ọ ghara ịdị ike.
Maka ndị gị na-echegbu onwe gị banyere ịkwọ ụgbọ mmiri gị na-agba ọsọ igwe ịnyịnya ibu gị ma ọ bụrụ na ị mebie ha wee sachaa griiz, anyị anaghị atụ aro ka jet na-asacha ebe a, naanị ịsaa ha. Chetakwa, ndị ọkachamara n’ọrụ na-ejikarị ugboelu asachapụ anyịnya igwe kwa ụbọchị. Anyị egosila na nyocha nke onwe anyị na biarin nwere ike ịnagide ịsacha ụgbọelu n'ụzọ dị ịtụnanya.
Ma m na-ekwu, nke ọma, lee nke ahụ. Ọ bụghị na ọ bụ mma, ugbu a ọ dị ọcha, dị ọcha. Nri abalị gị nwere ike iri nri? na.
Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịchọghị iji igwe jet, ị nwere ike ịnweghị ohere ịnweta otu. Ọ dị ụzọ nke atọ ị nwere ike isi wepụta ya n'èzí. Iji mee nke a, ị ga-achọ ihe ndị a: bọket ole na ole, nke nwere mmiri nkịtị, nke nwere mmiri ncha, ị nwere ike iji ncha efere ma ọ bụ agba ụgbọ ala dara ogbenye ihe yiri nke ahụ.
Mgbe ahụ ị ga-achọ degreaser gị na ahịhịa. Ugbu a amaara m na igwe kwụ otu ebe m adịghị ọcha ugbu a, m kpochara ya ugboro abụọ mana ị ga-ahapụrịrị ka echiche gị na-agba ọsọ. Cheedị na ọ dị ọcha, ugbu a anyị ga-amalite itinye degreaser na draịva na agbụ na iji ahịhịa na-arụ ọrụ ma na-atọpụ unyi, mgbe ọ bịara ịrụ ọrụ jiri ogbo na ncha mmiri fọdụrụ nke igwe kwụ otu ebe.
Mgbe ogbo tọgbọ chakoo, sachaa ya na mmiri dị ọcha, tinyezie mmiri ncha ndị ọzọ na ncha ncha ahụ. Nke a ga - egbochi gị ịtinye unyi na igwe kwụ otu ebe gị ọzọ. Ozugbo ọ kwusịrị, sachaa igwe kwụ otu ebe na draịva site na ịwụsa nke fọdụrụ dị ọcha, ncha mmiri na igwe kwụ otu ebe.
Were mmiri dị ọcha mejupụta bọket otu ma sachaa ihe fọdụrụ n ’ígwè ahụ site na ịwụkwasị ya na ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, jigide akwa nhicha ma ọ bụ akwa ma kpoo igwe kwụ otu ebe. Mgbe igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe kpọrọ nkụ, echefula itinye mmanụ mmanụ agbụ. (Isi mkpịsị aka na-ada) Ugbu a, usoro nke atọ a anaghị arụ ọrụ dị ọcha dị ka ndị nke ọzọ, mana ọ ka dị mma karịa nke ọzọ ịhapụ igwe kwụ otu ebe gị jọgburu onwe ya na unyi.
Echere na ịchọta edemede a bara uru ma ọ bụrụ na biko biko nye ya mkpịsị aka aka ma soro ndị enyi gị kerịta ya. Echefula ileta ụlọ ahịa GCN, anyị nwere uwe elu kachasị mma maka ụmụ mmadụ na ọtụtụ ihe ọma ndị ọzọ dị na ya. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ọzọ gbasara mmezi igwe kwụ otu ebe na ilekọta igwe kwụ otu ebe gị, nke ọma, pịa ebe a n'okpuru.
IKEA nwere igwe eji agba igwe?
IKEANkejiỌgba tum tum
Maka ụfọdụ, nke kacha mmaigwe kwụ otu ebenchekwa nchekwabuọnụ alaigwe kwụ otu ebenchekwa nchekwa. Naanị $ 2.50 kwa KVARTAL (ị ga-achọ abụọ) gbakwunyere ọnụ kposara, Mee N'onwe Gịịnyịnya ígwè bụnhọrọ mmefu ego kachasị mma na ndepụta a niile.Mkpebi 22 2015
Aha ya na-ada ka ihe nhicha mmiri, mana ọ bụghị, na dịka ị ga-ahụ na ngosi a, ọ dị mfe ịwụnye karịa Windows95, ọ ga-abụkwa ebe igwe gị ga-ebi na ebe ọ bụla i nwere ike iche. nwere ike. Anyị nwere nsogbu ebe a na Hurdler Studios, anyị bịara jiri igwe anyịnya anyị rụọ ọrụ kwa ụbọchị, mana anyị enweghị ebe dị mma ịchekwa ha ebe ahụ; Na nsogbu na aka, anyị wepụtara chepụta nkọwa ike a udi nke ga na-eche mgbalị ịgbakwunye gị igwe kwụ otu ebe na. Anyị gabigara ụyọkọ nke iterations, nwalere ruo na njedebe, ma nụchaa ruo mgbe ihe niile ziri ezi; Clug dabara ugbu a na taya igwe kwụ otu ebe, mana anyị nwere ọdịiche ndị ọzọ na bọọdụ ịbịaru.
Otu n’ime nsogbu dị n’ịchekwa ịnyịnya ígwè bụ akara ukwu nke sistemụ nchekwa nchekwa; Nke a bụ ezigbo ihe atụ: nko mkpuchi nchekwa nwere otu igwe kwụ otu ebe na ya na ebe atọ na-akwụsi ike na ịnyịnya igwe atọ na ya, ha niile n'otu mgbidi ahụ; Anyị arụnyela otu nko na ị nwere ike ịnweta ụdị nko a dịgasị iche iche n'ahịa taa n'akụkụ akụkụ rack anyị na-akwụsi ike ma anyị debere ha na ibe ha; Ọ bụrụ na achọrọ m iwepu igwe kwụ otu ebe a site na iji usoro nko ọdịnala, ọ gaghị ekwe omume ewepụsịrị igwe kwụ otu ọ bụla site na mpempe akwụkwọ ọ bụla, mana n'ihi Steady-Rack nke pụrụ iche na-emegharị ngwa ngwa, ọ dị m mkpa ịkwanye igwe kwụ otu ebe n'akụkụ ntakịrị. Achọrọ m iwepu aka ahụ, hapụ aka ahụ wee hapụ anyị ụzọ. Pụọla na igwe kwụ otu ebe gị, ị laghachitela n'ụlọ, ma nwee ụgbọ ala na-arụzi ụgbọala kpọmkwem ebe igwe eletriki igwe gị dị, ugbu a na Stead-Rack ị gaghị ebugharị ụgbọ ala ahụ ọzọ, ị ga-enwerịrị na-anya gị igwe kwụ otu ebe na ya N'azụ wheel, tinye ya, na i nwere ike ibu na ibudata na otu ebe rack ọ bụla n'akuku, ọ na-ekwesịghị ịdị na nri nkuku na mgbidi, snap na ogbe na kpọgidere, ma ọ bụrụ na m nweta whee ugbua, a ga m ebughachi ụgbọ ala ahụ, sụgharịa wiil a n'ụzọ, dọpụta wiilị a ntakịrị na-agbagharị agbagharị na m ga-ebutu ya n'ụzọ dị mfe. Otu ihe dị na Steady-Rack bụ na igwe kwụ otu ebe na-anọdụ ala na ngwongwo ibu ma ọ nweghị kọntaktị ọla-igwe ma ọlị.
Akụkụ ọzọ nke usoro mkpọchi a kwụ ọtọ na isi ihe dị mkpa bụ na ọ bụ akpa akwa nchekwa maka na ọ bụrụ na ị na-abanye na akpa ahụ na mberede, ọ ga-eme ka igwe kwụ otu ebe pụọ. Emere akpa akwa ahụ ka ọ daa ka ị belata ya mgbe i jiri ya, mgbe ị mechara, ị nwere ike ịpịpịa ya. Na mgbakwunye na atụmatụ niile na arụmọrụ nke Steady-Rack, otu n'ime ihe ndị anyị chọpụtara banyere nko ndị ọdịnala bụ na ha anaghị ele anya dị mma, yabụ anyị kpebiri ịme Steady-Rack ọ bụghị naanị na ọ bara uru na arụ ọrụ, kamakwa ọmarịcha anya onye oburu akpa.
A na-etinye shelf plastik na kit gị. Ejiri mpe mpe akwa ka ọ bụrụ na mgbe ị na-adọba ụgbọala ma na-agbagharị igwe kwụ otu ebe, naanị ị na-etinye ụkwụ azụ n'azụ n'akụkụ abụọ nke ugwu ahụ na Na n'akụkụ nke a na-eme ka igwe kwụ otu ebe na-aga n'ihu ma na-enye gị ohere ịfegharị ịnyịnya ígwè gị ma ọ bụ emeghị ka ihe ize ndụ nke igwe kwụ otu ebe na-agbagharị ma na-emetụ ibe ha aka.
Kedu ka ị ga-esi kwụgidere igwe kwụ otu ebe n'ime ụlọ?
Na otu mgbochi na mee ụdị rigging,NaAkpa Store Ceiling-Ugwu BikeEbuli eluigwe kwụ otu ebe gịsite naihen'ala kakpọgidereọ dị elu n'imeiheime ụlọ. A usoro pole usoro mounts kaiheuko ụlọ nkeiheime ụlọ, mgbe ahụ, nko na-ejikọta yaiheoche na aka mgbe ọ bụlaigwe kwụ otu ebe gịdị njikere maka liftoff.Eprel 9 2020
Kedu ihe bụ akpa nchekwa igwe kwụ otu ebe?
NaNchekwa Bike kacha mmaAtụmatụ
Nhọrọ anyị. DeltaOkirikiriMichelangelo Abụọ-Igwe kwụ otu ebeIke ndọda. Nke anyiọkacha mmasịime ụlọigwe kwụ otu ebe.
Onye na-esote. Steadyrack OmumaAkwa. Ọ bụrụ na ị ga-aga vetikal.
Ọzọkwaukwu. Ibera KemeghiIgweMgbidi Mgbidi.
Ọzọkwaukwu. Nzaghachi Egwuregwu Velo Kọlụm.
Ego mmefu ego. Racor Solo VerticalỌgba tum tum.
Eprel 27 2021
Ọ dị mma ikowe igwe kwụ otu ebe na wiil ha?
Ọtụtụ ndị ọkachamara kwenyere na ọ bụnchebe kpọgiderekaigwe kwụ otu ebe site na wiil ya. Dabere na Jim Langley, onye edemede nke Accordinglọ GịIgweOnodi, 'ọ bụ n'ụzọ zuru okènchebe kpọgidereọtụtụigwesite na otuwiil. Naanị ihe ndị a gụpụrụ bụanyịnya igwenwere ọmarịcha ikuku carbonrimnke ahụ dị mfe carbon ahụ ga-agbanwe ma ọ bụrụ na ị pịa ya aka. '
Enwere m ike ịchekwa igwe kwụ otu ebe m?
Enwere ike ileghara nke a anya ma ọ bụrụ naigwe kwụ otu ebeatụmatụ rim brek, ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ Shimano XT, SRAM Guide, ma ọ bụ ụdị ọzọ nke hydraulic brek, zereịchekwanke giigwe isi alan'ime ụgbọala gị.Mar 9 2016
Kedu ka ị ga-esi kwụgidere igwe kwụ otu ebe maka nchekwa?
Site na nhọrọ kachasị ọnụ, ihe nkedonchekwanko maka mgbidi gị ma ọ bụ ụlọ gị dị mfe ma dị irèụzọ kpọgiderenke giigwe kwụ otu ebepụọ n'ala na ụzọ. Jiri naanị otu nko nakpọgiderenke giigwe kwụ otu ebeekwesị ma ọ bụ abụọ na-kpọgidereọ kwụ ọtọ. Maka ala kachasị-na mgbidi-nchekwa nchekwa ohere,kpọgiderenke giigwe kwụ otu ebeelu.Mar 15 2021
Kedụ ka m ga-esi akwụnye igwe kwụ otu ebe n’elu mgbidi m?
Iji wụnye nke amgbidi-ebiriigwe kwụ otu ebeogbe, jiri stud Finder chọta ebe amgbidistud ebe ị na-ugwu; guzo n'ihu wheel nkougwuebe a kaa akara ebe ọnọdụ nke oghere ya abụọ dị na pensụl. Next, akuakuzinwo ndị a oghere na a ike akuakuzinwo ma nọrọ ná nchebe naugwukamgbidiya na kposara ya.
Kwesiri ikwusi igwe kwụ otu ebe?
Ikwado anyịnya igwe gịna mgbidi ga-azọpụta ibu nke ohere nanke giwụsịrị ma ọ bụ ụgbọala. Ọ bụrụ naanyịnya igwenwere ìhè zuru oke iji bulie ala (dị ka okporo ụzọanyịnya igwe) mgbe ahụgịnwere ikekpọgidereha dị elu n’elu mgbidi (ma ọ bụ n’uko ụlọ) iji mee ka ala doo anya. ọ bụlaigwe kwụ otu ebeA na-ejide ya iche na nke ọzọ ka ha wee ghara ịkọ ma ọ bụ mebie.
Ọ dị mma ịchekwa igwe kwụ otu ebe?
Azịza ya bụ na ọ bụọ dị mma ịchekwakaigwe kwụ otu ebeiri aigwe kwụ otu ebemgbidi nko,ziri ezima ọ bụ na-arapara n’uko ụlọ.
Kedu nke kacha mma igwe kwụ otu ebe maka ụlọ?
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na e nwere ọtụtụ nhọrọ-ma maka o kwere omume igwe kwụ otu ebe ebe obibi na ụdị nke racks-anyị kwenyere na Delta Cycle Michelangelo Gravity Stand bụ nhọrọ kachasị mma maka ọtụtụ ndị chọrọ ịchekwa igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ abụọ na obere ulo.
Ebee ka m nwere ike ịhụ mkpọchi igwe kwụ otu ebe?
Kpọọ ndị ọrụ anyị maara ihe maka enyemaka - ha bụ ndị ọkachamara ma a bịa n'ọdụ ụgbọ ịnyịnya ibu azụmahịa maka ụlọ akwụkwọ, ogige ntụrụndụ, azụmahịa, mahadum, ụlọ obibi, ụlọ azụmahịa na ebe ndị ọzọ n'èzí na ime ụlọ. Anyị na-enye ebe a na-adọba igwe kwụ otu ebe maka ebe dị mkpirikpi na ogologo oge.
Kedu ihe m nwere ike iji dị ka ebe nchekwa igwe kwụ otu ebe?
Okpokoro okpokoro ochie dị ka ebe nchekwa: A pụrụ ịmepụta ogbe ịnyịnya ígwè nke Mee N'onwe Gị n'ụlọ, na-eji igwe kwụ otu ebe ochie. Ukpa Ugbaala Ugba site Artifox: E si na osisi na nchara mee ya, ogwe igwe kwụ otu ebe na-eji obere mgbidi ohere. Ọ na-edozi ọtụtụ nha na ụdị nke igwe kwụ otu ebe.